Nagu Saabsan - Du Duusilai Garments & Attire Co., Ltd.
BAARISTA KARIIMKA dharka u adkaysata dharka cuntada waa soo-saare sumcad u abuuraya yunifoom u gaar ah shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha waaweyn.
CHECKEDOUT waxaa la aasaasay 1995, xaruntiisuna waxay ku taal magaalada Beijing, Shiinaha.
Badeecadaha ayaa loo dhoofiyay in ka badan 50 dal oo ay ku jiraan in kabadan 80 dukaanno qaas ah iyo 100 iibsi koox ah. Cabbirka iibku waa NO.1 gudaha Shiinaha, iyadoo iibinta sannadlaha ah ay ka badan tahay 7 milyan oo gogo '. In kabadan 100 dukaanno guri ah iyo 200 oo qaybiyeyaal ah.
SAXIIX iyada oo leh 3 saldhig wax soo saar oo ku yaal Yanjiao, Qingxian iyo Yuncheng. Qiyaastii 500 oo shaqaale oo xaqiijinaya inaan buuxin karno shuruudaha macaamiisha kaladuwan.
Alaabada loo fiirsado ayaa kala duwan oo ay ka mid yihiin jaakad khafiifka ah, noocyo qafis ah, surwaal qafis ah, koofiyado, kiish mindi iwm. Dhammaan alaabada ku habboon hoteellada, maqaayadaha, baararka, kafateeriyada, dukaan dubista iwm.
CHECKEDOUT waa kafateeriyaha Chef Uniform ee Shirweynaha Cuntada Adduunka; Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa u xilsaaray lammaane isku mid ah; CCTV-2 Chef King tartan loo qoondeeyey alaab-qeybiye iwm.
Wadashaqeynta YKK, TORAY iyo shirkadaha kale ee Fortune 500 si loo abuuro taxane gaar ah oo alaabooyin ah oo lagu dhaqi karo astaamaha, bilaa-shukulaatada, suuf tayo sare leh, oo ka xor ah cudurka kansarka, iyo nolosha adeegga ee muddada dheer. Waxay yareysaa qadar badan oo kaarbo oksaydh ah bulshada waxayna qayb weyn ka geysaneysaa badbaadada cuntada iyo caafimaadka bulshada sanad walba.
Kooxda xirfadlayaasha ah ee 'R&D' oo leh 20 jaanis ayaa qabsata macluumaadka ugu fiican ee ku saabsan moodada waxayna horumariyaan alaabada leh qiimayaal bilic iyo firfircoon.
Kooxda 'CHECKEDOUT' waxay ilaalineysaa u heellanaanta, xirfadda iyo farsamada gacanta iyo nidarradeeda inay CHECKEDOUT dharka ku-adkeysiga u adkeysiga u leh astaanta caanka ah ee adduunka.